ရွေးကောက်ပွဲမျှတမူ ရှိမရှိ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေစောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခွင်.ရမည် ~ YaWai (ပိုင်စိုးသူ)
ရွေးကောက်ပွဲမျှတမူ ရှိမရှိ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေစောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခွင်.ရမည်
Postado Wednesday, March 14, 2012 at 6:06 AM
လာမယ်.ဧပြီ ၁ ရက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနေ. မဲရုံတွေမှာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ အနေနဲ. မဲရုံကိုယ်စားလှယ်ထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲတရား မျှတမူ ရှိမရှိ စစ်ဆေးစောင်.ကြည့်ခွင့် ပြုလိုက်ပြီလု.ိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ကြေညာ လိုက်ပါတယ်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်းတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ မဲရုံအသီးသီး မှာ ကိုယ်စား မဲရုံ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးနှင်. အတူ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ထားရှိနိုင်တဲ. အကြောင်းနဲ. ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် တစ်ပတ်ကြိုတင်ပြီး မြု.ိနယ်ကော်မရှင်မှာ လျှောက်ထားရမယ်လု.ိ ကြေညာချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
မဲရုံကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ. မဲပေးတဲ. နေ့မှာ မဲရုံအတွင်း ၀င်ရောက်ခွင်. ရမှာဖြစ်ပြီး မဲရေ တွင်ခြင်းကိုလည်း ကြည်.ရူစစ်ဆေးခွင်. ရမယ်လု.ိ သိရပါတယ်။ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရဲ့ အခုကြေညာချက်နဲ. ပတ်သတ်ပြီး လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတမူ ရှိလိမ့်မည်ဟု သိရှိရပါတယ်။
Myanmar Express မှဖြစ်သည်။